Pọtụfoliyo diversification na Unbalancing - Blockchain News
Ọ bụrụ na ihe ọṅụ ka ike kpebiri na ha chọrọ ka ha na-etinye ego na cryptocurrencies ma mụọ dum ụdịdị dị iche iche nke na-akpali mkpụrụ ego, ọ bụ oge na-eche banyere Ọdịdị nke ahụ ga-eme n'ọdịnihu ego Pọtụfoliyo.
Ulo oru mbo Pọtụfoliyo bụ a collection of kaadị akụ anakọtara iji nweta otu ihe mgbaru ọsọ na ụdị uru. Ihe bụ, ahịa omume mgbe ụfọdụ na-achọ ndị dị otú ahụ na ọnọdụ, nke ichebe ẹdude akụ bụ ugbua a nnukwu mmeri. Ya mere, mgbe na-akpụ a Pọtụfoliyo, ọ dị mkpa ka ntị bụghị naanị ndị nwere nke a akpan akpan mkpụrụ ego, kamakwa ụzọ nke ịkpata na kaadị ahịa na-enye. na, n'ezie, ikpeazụ bụ ime ihe a na-etinye gị ego gị niile na otu otu mkpụrụ ego na olileanya na ọ ga-eme ka ị na-a kaadị nde.
Fast na Egwu vs. Long na Easy
Conventionally, ego azum nwere ike kewara abụọ n'akụkụ. Ogologo oge investments na-họọrọ mgbanwe investors, bụ ndị dị njikere ịchụ ngwa ngwa uru (hoo haa na-ekwu okwu, anyị hụrụ kaadị ahịa n'ihi na). More ịgba chaa chaa ahịa sonyere ịdabere na ike ike na-adịghị adịte trading, ekwe àmụmà-ngwa-ngwa ego tinyere a elu n'ihe ize ndụ nke ịbụ ndị ihe nile n'otu oge.
The ego Pọtụfoliyo pụrụ kpụrụ na ndabere nke abụọ ndị a azum, nkerisi dum n'usoro nke cryptocurrencies n'ime ogologo oge na-adịghị adịte ndị. Ọ bụ uru na-echeta, Otú ọ dị, na ọ bụrụ na na-adịgide adịgide, pụrụ ịdabere na ego pụrụ nanị ike zụrụ ma na-echere maka ha price imebi ihe ndekọ, mgbe maka obere oge investments, otu ọ dịla, ọ ga-adị mkpa amaba n'ime fundamentals nke trading, ịmụta iwu na omenala nke ndị ahịa, ndị fundamentals nke teknuzu analysis, na-agbalịsi ike nyochaa ozi ndabere nke kaadị ahịa.
Ekwela nwekwara ichefu eziokwu ahụ bụ na ọbụna a yiri pụrụ ịdabere na mkpụrụ ego nwere ike na-akpa àgwà na-ekwesịghị ekwesị n'ụzọ na inikiet inikiet amaba n'ime ogbu mmiri nke ahịa. Ndị zụtara Bitcoin maka $19,000 na o siri ike ugbu a na-atụle ya a pụrụ ịdabere na ego. The ahịa bụ ahịa, na ogologo okwu investments achọ Spartan ndidi na a mesikwuru ihe ụjọ usoro. Ghara ida sanity na ghara ere niile dị akụ na a kacha nta price bụ isi ọrụ nke ihe ọṅụ onye banyere ahịa maka n'ikpeazụ.
N'agbata-agba na Bulls
Otu n'ime ndị kasị ambiguous ụzọ nke diversifying ize ndụ bụ na-a ọnọdụ n'etiti oké ehi na anụ ọhịa bea, nkerisi akụ dị otú ahụ n'ụzọ na o nwere ihe na-eme na ma ndị bullish na bearish ọnọdụ. E nwere a elu n'ihe ize ndụ nke jerking n'etiti otu na ndị ọzọ n'ihi na ị na-ekpebi ma ị chọrọ isonyere smart ma ọ bụ ndị mara mma. Na mgbakwunye, mmadụ ole na ole jikwaa ka ịgbanwee ụbụrụ ha n'etiti na-atụ anya nke mbili na ọdịda nke a kaadị akpan owo. Dị ka a na-achị, ebe dara ada na ịhụnanya na ihe akpan owo, M chọrọ ikwere na ihe isi ike na-adịru nwa oge, na grafụ na-ezo ihe, na mkpụrụ ego bụ banyere wupu kandụl elu.
Ahaghị nhata a ga-adabara jiri obi ịta mmiri investors ndị ogologo okwukwe na ọrụ ebube, ghọtara n'ókè nke ahịa, na-enwe ike ikwu ihe omume nke ma ndị ehi na bear n'ọnụ ụlọ ogologo.
Ọ dịghị Shame na Plagiarism
Ị ga-enwe ike zere ọtụtụ emehie ma ọ bụrụ na tupu etinye ị na-amụta na ahụmahụ nke ndị ogologo kemgbe ke ahịa. Ọ dabara nke ọma, e nwere ọtụtụ nke na-emeghe ego, ebe investors ebipụta ọmụma banyere ha kaadị portfolios ụbọchị ọ bụla. Lee maka na blog ma ọ bụ Telegram ọwa, nke ị na-ahụ ihe na-akpali. Ntị ka kwụsie ike nke Pọtụfoliyo, na ibiere nke mkpụrụ ego na-atụkwasịkwara ya, na nke omume nke ọṅụ na ikpe nke na ọnọdụ na-achọghị nke ahịa. Ụdị gị Pọtụfoliyo site ntụnyere na na Pọtụfoliyo na, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eso ọṅụ nke na-atụ aro banyere zuo nke ọhụrụ akụ.
Nke abụọ nhọrọ bụghị metụtara mbịne na ụbụrụ na-blindly eso atụ aro nke agbanwe. Ruo taa, e nwere ọtụtụ iri puku kwuru iri kaadị bots, nke na kwa mode-enye n'ókè ịzụta ma ọ bụ na-ere a akpan akpan kaadị akpan owo, na-egosi na nkezi nke ngụkọta Pọtụfoliyo, esonụ nke ga-ebelata ihe ize ndụ. Ajụjụ ọzọ bụ na ọ bụ amaghị ihe ruru eru ndị ahịa n'azụ ngwa n'ezie nwere, ọ dịghị onye ga-echebe gị si na-abuana ke uka nfuli na dumps, na na ihe omume nke a ọdịda, i nwere ike na-ata ụta ngwa na ekwentị gị.
Alọghachi ohere earnings, nke kaadị ahịa na-enye, otu nke kasị kwesị ekwesị nhọrọ maka unbalancing Pọtụfoliyo bụ nkesa nke akụ site ego ngwá. Nke a bụ otú ọkachamara ego ego ọrụ.
Nke a na ụdị Pọtụfoliyo ike anya ihe dị ka nke a:
25% eduga ego n'ihi na ogologo oge ego (BTC, ETH, XRP);
25% na-ajụ-okwu ahia n'elu altcoins;
10% robotized mkpezi ikpe;
10% trading robots na algorithmic trading;
10% erekwa na ozi ọma (nsuso Gainers na losers);
10% investments na ekwe ICOs;
10% elu-ize ndụ kaadị akụ.
Onu mbak dị otú ahụ a Pọtụfoliyo ga-adabere na otú ọma maara na ị nọ na a ụfọdụ ukeme atụmatụ na otú kwesịrị ekwesị na ọ bụ maka taa ọnọdụ na kaadị ahịa.
A kaadị Pọtụfoliyo pụrụ kpụrụ ndị dabeere na ógbè nke ego dị ka a kwa ụbọchị mgbanwe burukwa na okwu nke iwu iwu nke cryptocurrency na ụwa nwere ike budata emetụta udu. Ị pụrụ ịtụkwasị obi nke Pọtụfoliyo na enweta ego njikwa, Otú ọ dị, n'okwu a, ị ga-akwụ a pasent nke uru natara.
Otu ọ dịla, ozugbo kpụrụ, na kaadị Pọtụfoliyo-agaghị efe gị ndụ gị niile. Ọ ga-mkpa-enyocha na “maa jijiji” na ahịa mgbanwe, na ọdịdị ọhụrụ ekwe na mụ ego, na, akpatre, na ọnọdụ na-achọghị nke ahịa, mgbe ọbụna ndị kasị tụkwasịrị obi kaadị akụ ime ka a ọchịchọ ere ihe niile ma na-akwagakwa fiat ego elu stocking.
Israel ebipụta a atụmatụ maka ụtụ isi nke ICOs
The Israel governme ...
Bill Gates kwuru Bitcoin bụ obere tech mere ka ọnwụ na a kpọmkwem
Na a Reddit ma ọ bụ na T ...
Russia si Gazprombank nwalee cryptocurrency ọrụ
Russia atọ-large ...
Previous Post:Russia si Gazprombank nwalee cryptocurrency ọrụ
Next Post:South Korea si regulator kọrọ iwu 12 cryptocurrency mgbanwe idegharị ahịa contracts
April 17, 2018 na 5:00 PM